Fitsidihana: Biraon’ny Vavolombelon’i Jehovah any Patterson, Wallkill, ary Warwick
Hifidy Toerana Afrika Atsimo Albania Alemaina Angola Aostralia Arzantina Barbade Belzika Bénin Boligaria Bolivia Brezila Burundi Cameroun Côte d’Ivoire Cuba Danemark Ekoatera Espaina Etazonia Etiopia Failandy Fidji Frantsa Géorgie Ghana Grande-Bretagne Gresy Guam Haïti Holandy Hong-Kong Hongria Inde Indonezia Italia Japon Kanada Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kolombia Korea Kroasia Liberia Macédoine Madagasikara Malawi Meksika Moldavia Mozambika Myanmar Nizeria Nosy Salomon Nouvelle-Calédonie Ogandà Papouasie-Nouvelle-Guinée Paragoay Peroa Philippines Polonina Portogaly Repoblika Demokratikan’i Congo Repoblika Dominikanina République centrafricaine Romania Rwanda Sénégal Serbia Sierra Leone Silia Slovakia Slovenia Sri Lanka Suriname Tahiti Tailandy Taïwan Trinité sy Tobago Ukraine Venezoelà Zambia Zimbabwe
Mamandriha Toerana Amin’ny Fitsidihana
Manaova famandrihana alohan’ny hahatongavanao mitsidika ny biraonay any Etazonia. Misy rohy ho an’ny toerana tsirairay azonao tsidihina, etsy ambany, ary azonao ampiasaina ireo rehefa hanao famandrihana ianao. Marihina fa toerana roa, fara fahabetsany, no tsara tsidihina ao anatin’ny iray andro.
Tokony hanao famandrihana foana izay te hitsidika na firy na firy izy ireo, ary na aiza na aiza toerana tiany hotsidihina amin’ny biraonay any Etazonia.
Mpitsidika latsaka ny 20
Fanamarihana: Rehefa mifidy toerana iray etsy ambany ianao, dia halefa any amin’ny tranonkala iray mpiara-miasa aminay, mba hahafahanao manao famandrihana. Tsy andoavam-bola ny fanaovana famandrihana, ka tsy mihatra izay resaka vola ao anatiny, ohatra hoe momba ny fandoavam-bola na sarany na hetra. Ho lasa any amin’ny Betelan’i Etazonia, any amin’izay toerana nofidinao, ny mombamomba anao rehefa alefanao ilay famandrihana. Mihatra ny Fifanekena Momba ny Tsiambaratelo sy ny Fifanekena napetrakay rehefa mandefa ny mombamomba anao ianao.
Hamandrika fitsidihana any Patterson
Hamandrika fitsidihana any Wallkill
Hamandrika fitsidihana any Warwick
Mpitsidika 20 na mihoatra
Mandefasa fangatahana hitsidika ny birao any Patterson na Wallkill na Warwick, raha maromaro ianareo no hiaraka hitsidika.
Hangataka hitsidika: Olona 20 na mihoatra
Azonao foanana ato amin’ny Internet ny famandrihana fitsidihana na ny fangatahana hitsidika nalefanao.
Manaova famandrihana alohan’ny hahatongavanao mitsidika.
Alatsinainy hatramin’ny zoma
Maraina: 8.00–11.00; tolakandro: 1.00–4.00
Maharitra adiny roa
Manao ny sary ho an’ireo boky sy gazetinay, ary ny raki-peo sy video. Asongadina mandritra ny fitsidihana ireo sekoly ara-baiboly atao any.
Manao pirinty boky ara-baiboly miisa 25 tapitrisa mahery isan-taona. Mandefa boky sy gazety amin’ny fiteny 360 mahery any amin’ny sampana maneran-tany, sy any amin’ny fiangonana 15 000 mahery any Etazonia sy Kanada ary Karaiba.
Azo tsidihina ny any Warwick manomboka amin’ny alatsinainy 3 Aprily 2017. Manaova famandrihana alohan’ny hahatongavanao mitsidika.
8:00 maraina–4:00 tolakandro
(Fijerena fampirantiana: Tsy misy mitarika)
Maraina: 8:00–11:00; tolakandro: 1:00–4:00
Fijerena fampirantiana: Tsy misy mitarika
Ny Baiboly sy ny Anaran’Andriamanitra. Aseho amin’ity fampirantiana ity ireo Baiboly vitsy mpanana, ary asongadina ao hoe mbola voatahiry foana ny anaran’Andriamanitra na dia betsaka aza no nitady hanala azy tao amin’ny Baiboly. Ahitana Baiboly hafa vitsy mpanana miaraka amin’ny vakoka hafa mifandray amin’ny Baiboly koa ao.
Vahoaka Mitondra ny Anaran’i Jehovah. Aseho amin’ity fampirantiana ity ny tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah. Hita amin’ireo vakoka sy sary ary fitantaran’ireo niaina tamin’izany fa mitarika sy mampianatra ary mandamina ny vahoakany tsikelikely i Jehovah, mba hanaovan’izy ireo ny sitrapony.
Foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah: Finoana Aseho Amin’ny Atao. Hazavaina amin’ity fampirantiana ity izay ataon’ireo komity eo anivon’ny Filan-kevi-pitantanana. Ampian’izy ireo koa ny Vavolombelon’i Jehovah mba hivory, hanao mpianatra, hahazo sakafo ara-panahy, ary hifankatia satria izany no asain’ny Soratra Masina ataon’izy ireo.
Maharitra 20 minitra ny fitsidihana ny ampahany amin’ireo trano misy ny birao sy sampan’asa samihafa, sy ilay toerana ao Warwick.
Handika bokikelin’ny fitsidihana.
Birao sy Fitsidihana: Etazonia